ओसाकाको मोह - ५ घुम्ने पर्ने ठाउँ | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > ओसाकाको मोह – ५ घुम्ने पर्ने ठाउँ
ओसाका एक बिसेष सहर हो। यो टोक्यो भन्दा अलि भिन्न छ। सोझो रुपमा भन्दा टोक्यो आएको १ महिना पछि म ओसाका घुम्न गए। मलाई ओसाका भने टोक्यो भन्दा अलि तितरबीतर बहेको र केहि कुराहरु नमिलेको जस्तो लाग्यो। जुन एक्सप्लोर गर्न आफैमा रमाइलो कुरा हो। मलाई ओसाका अलि हेक्टिक र लाउड लाग्यो। यहाँ मानिसहरु एस्कलेटरमा दाया तिर उभिन्छन जुन टोक्यो भन्दा ठिक बिपरित हो। कतै कतै त मानिसहरु दुवै साईड ओगट्छन। सबवे पनि टोक्योको भन्दा बढी होहल्ला सुनिन्थ्यो। स्ट्रिटहरु पनि टोक्योको भन्दा कलरफुल देखिन्थे। ओसाकाको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। यदि हजुर टोक्यो घुम्न आउदै हुनु हुन्छ भने, ओसाकालाई आफ्नो बकेट लिस्टमा पक्कै राख्नुहोस।
ओसाका क्यासल, दोतोंबोरी, ओसाका एक्वारीयम काइयुकान र अन्य थुप्रै एट्राक्सनको थलो हो। त्यसैगरी यो सहर निकै मिठो स्ट्रिट फुड, आधुनिक आर्किटेक्चर, मनोरम रात्री जीबनको लागि पनि परिचित छ। काम र अन्य वेकेण्ड प्लानको वाध्यताले म ओसाका एक दिनकोलागि मात्र गएको थिए। जापानमा हेर्न र घुम्न लायक ठाउ थुप्रै भएको हुनाले गर्दा पनि राम्रो संग समय मिलाएर घुमिएन भने हजुरले थुप्रै ठाउ छुटाउनु हुनेछ। समय गएको त पत्तै हुदैन, ओसाका समय मिलाएर फेरी आउने निधो गरेको छु। हजुरहरु पनि मा जस्तै एक दिनको लागि ओसाका आउदै हुनुहुन्छ भने गर्न सकिने कुराहरु बताउनेछु।
१. ओसाका क्यासल
ओसाका क्यासल निकै फेमस क्यासल हो। यो अहिले जापानकै लोकप्रिय ल्याण्ड्मार्क बनेको छ। आजुची-मोमोयामा युगमा यो क्यासलले जापानलाई एकत्रित गर्न मद्दत गरेको थियो। यो भब्य क्यासल पाकै पनि जानु होला। यो क्यासललाई अन्य बगैचा र मुजियमले घेरिएको छ। फुलहरु हेर्दै शान्त बगैचा घुम्दा हजुरलाई जापानको ईतिहासमा पुगेको अनुभब हुन्छ।
२. दोतोंबोरी स्ट्रिट
यो स्ट्रीट पर्यटकहरुको निकै पपुलर स्ट्रिट हो। यहाँ हजुरले धेरै प्रकारका स्ट्रिट फुड र पसलहरु भेट्नु हुनेछ। यो स्ट्रिटको अन्त्य तिर निकै राम्रा हल्लिने मुर्तिहरु पनि छन्। यहाँको ताकोयाकी खान नबिर्सिनु होला। राति यो स्ट्रिट नियोन लाइटले निकै रोमान्चक देखिन्छ। यहाँको भेराईटि रेस्टुराण्टबारले हजुरलाई आफु तिर तान्ने छ।
३. तेंनोंजी क्षेत्र
यो शितेंनोजी मन्दिरको घर हो जुन जापानको सबै भन्दा पुरानो मन्दिर हो। तेंनोजी क्षेत्र ईतिहाशिक साईटले भरिएको छ जुन हजुरले छूटाउन चाहनुहुन्न। यो एउटा ठाउँले नै हजुरलाई ओसाकाको सास्कृतिक र प्राचिन ईतिहास संग परिचय गराउने छ। यसले हजुरलाई अन्थेण्टिक जापनको अनुभब दिलाउने छ।
४. नाम्बा यासाका श्राईन
यो श्राईन ओसाकाको नाम्बा क्षेत्रमा छ। यहाँ मानब निर्मित सिंहको ठूलो टाउको मुर्ति छ। यो मुर्तिले ईभिल स्पिरिटलाई टाढा भगाउने काम गर्दछ। यसले सबैलाई सुभ साईट प्रदान गर्ने भनिन्छ। यहाँको वास्तुकला पुरानो र रेट्रो छ। यसले हजुरलाई ओसाकाको निकै भागदौडबाट अलि शान्त बातावरणमा जानु छ यहाँ जानु होस्।
A post shared by chio (@chiochio_coco) on Jun 15, 2019 at 5:07pm PDT
५. आबेनो हरुकास
आबेनो हरुकास जापानको सबै भन्दा अग्लो बिल्डिंग हो। यसको उचाई ३०० मिटर छ। यहाँ थुप्रै डिपार्टमेन्ट स्टोर, होटल, अफिस, स्टेसन जाने बाटो, आर्ट म्युजिअमहरु छन्। तर यहाँको मन लोभ्याउने कुरा भनेको अब्जरभेसन डेक हो। यहाँबाट हजुरले ओसाकाको मनोरम दृश्य देख्नु हुनेछ।